Silsiladda Shiinuhu Qarxiyey ee Jeex-Check Hose Cable Choker saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Linhui Hardware
Jeegaga garaaca waxa loo qaabeeyey si looga hortago dhaawacyada ama shilalka ka dhasha tuubada ama isku xidhka oo xumaada. Jeegaga karbaashka ayaa ku fidaya qalabka tuubada si ay u ilaaliso badbaadada tuubada. Kaliya dib u soo celi guga oo simbiriirixan siddooyinka ku yaal tuubada tuubada ka hor inta aanad xidhin si aad uga ilaaliso tuubada karbaashta.
Walxaha: birta kaarboon galvanized, birta aan la taaban karin.
Hubinta Tuubada Badbaadada Tuubbada waxaa lagula talinayaa dhammaan codsiyada tuubada cadaadiska la saaray ee ka badan 1/2 inch, si loo ilaaliyo hawl-wadeennada iyo goobaha shaqada. Si aad uga hortagto dhaawac halis ah oo ay sababto tuubada ama isku xidhka isku xidhka oo xumaada, ku rakib Jeeli Jeega xidhiidhka tuubada kasta iyo ka qalab / isha hawo ilaa tuubada. Siddooyinka gu'ga ku raran ayaa si fudud u hagaajiya si ay uga dul baxaan isku-xidhyada oo ay si adag u qabsadaan tuubada. Sidoo kale loo yaqaanno xirayaasha jeedalka ama fiilooyinka choker-ka, fiilooyinkani waxay lama huraan u yihiin dhammaan codsiyada tuubada sahayda oofwareenka ah.
Jeegaga Badbaadada Tuubbada Jeegaga, oo ay weheliyaan valves hubinta oofwareenka iyo fiilooyinka badbaadada, ayaa ah alaabo muhiim u ah nidaamka tuubada oofwareenka oo badbaado leh. Kormeerka joogtada ah iyo beddelka qaybaha duugoobay ayaa sidoo kale lama huraan u ah ilaalinta nidaamka badbaadada leh iyo goobta shaqada. Had iyo jeer baddal jeegaga karbaasha haddii ay dhacdo guuldarro
karbaash 1/8" * 20 1/4" Birta kaarboonka galvanized 3 510 180 12 1.2 1/2 "- 1 1/4" 700
Hore: Shiinaha 2021 Naqshad Cusub oo Tuubbada Hawo-qaadka Cable-ka - Hose Hobbles Chokers Birta Cas - Linhui Hardware
Xakamaynta Tuubada Cable
Xakamaynta sharabaadada karbaash